UKUQALA: UMartin Vrijland
ahanjiswe UKUQALA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-10 February 2020	• 17 Amazwana
Kukhona isikhukhula esikhulu ezindabeni eziningana zezinganekwane emhlabeni wonke. Ezinkolweni ezinkulu zomhlaba lokhu kubizwa ngokuthi isikhukhula kanti uNowa nguyena owakha umkhumbi wokugcwala umhlaba emva kolaka lukaNkulunkulu ngesikhukhula. Lokho ngokwako sekukhombisa ukuthi kwakukhona ibhizinisi […]
UPapa uFrancis ubiza abaholi bomhlaba ukuthi baye eVatican kwi-14 ngoMeyi 2020 ngenhloso yomhlaba wonke
ahanjiswe UKUQALA, Ukuhlubuka Okuqothulayo, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-26 Septemba 2019	• 10 Amazwana
UPapa uFrancis, umJesuit Saint Nicholas ngaphandle kwentshebe, Kunezinto ezimbili ezibalulekile ku-ajenda yalo mhlangano lapho wonke umuntu kufanele eze. Owokuqala […]
Ukuqedwa: iphilisi lokuvuselela iqiniso iqiniso! Indoda eneminyaka eyi-80 iginya okokuqala ngemuva kokuhlolwa ezilwaneni
ahanjiswe UKUQALA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-29 Agasti 2019	• 1 Comment
UDavid Sinclair unguprofesa emnyangweni wezakhi zofuzo, iBlavatnik Institute kanye nomqondisi wokubambisana wePaul F. Glenn Center for the Biological Mechanisms of Aging at Harvard Medical School. Esethulweni esingezansi, uchaza ukuthi inqubo yokuguga yomzimba womuntu ihlobene kanjani nokulahleka kolwazi; kufane ne- […]
Kungani isintu silingeka ukuba sifinyelele ukungafi kanye nokuhlangana nge-AI
ahanjiswe UKUQALA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-30 Julayi 2019	• 14 Amazwana
Uma sifunda zonke izinkomba zalokhu eziyikho, siyabona ukuthi umhlaba uguquka ngokushesha nokuthi i-2.0 yomuntu iyiqiniso phakathi kwamanje nangeminyaka ye-10. Sizozwa umhlaba ne-2.0 yomhlaba (nezinye izinhlobo eziningi) ezizungeze i-2045. Ngakho-ke isifanekiseli sothingo nomaphi lapho []
Kusuka kuRutger Hauer's Fruit waseTurkey kuya ku-Gay Pride kanye nomkhosi we-Milkshake
ahanjiswe UKUQALA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-29 Julayi 2019	• 5 Amazwana
Ngibuzwe izolo ukuthi ngabe ngiwabonile amafilimu kaRutger Hauer. Ngokuya komlobi, lezo kwakungamafilimu ayinqaba. Izithelo zaseTurkey ngoba zaphule izithambiso zocansi kanti enye ifilimu yayihamba kahle. Angikaze ngiwabone womabili la mafilimu, ngoba nginohlobo lokuphazamiseka kwemvelo kuma-hypes, kodwa ngiyazi […]
Imininingwane ebalulekile yokuphila kwakho kwamanje
ahanjiswe UKUQALA	by UMartin Vrijland	ngo-22 Julayi 2019	• 19 Amazwana
Isikhathi sokuphuma ezweni lephupho futhi uqale ukubheka izwe elikuzungezile ngalokho okufanele. Lokho kuzoletha izinguquko eziyisisekelo empilweni yakho. Ngakho-ke ngithanda ukuveza lokhu okushiwo nguRichard Thieme (ngasekugcineni kwalesi sihloko), owayengumpristi owake waphenduka waba [...]
"Umphefumulo olinganisiwe," "ukuvuselelwa," ingabe lokho kukhona?
ahanjiswe UKUQALA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-20 Julayi 2019	• 12 Amazwana
Kuleli sonto kuvele ingxoxo encane lapha kwisayithi mayelana nokuphindukuzalwa kanye nombuzo wokuthi ngabe lokho kukhona yini. Ngokusho kwengxoxo, bekuyoba khona ubufakazi obanele bokufakaza okuzokwenza kucace ukuthi ukuphindukuzalwa kukhona. Umbono wami wukuthi ingxoxo iyaba yinto engafanele uma ungena esihlokweni sethu sangempela [...]
Sizoletha kanjani ushintsho olukhulu uma i-99% ingaphili?
ahanjiswe UKUQALA	by UMartin Vrijland	ngo-15 Julayi 2019	• 32 Amazwana
Manje sesifinyelele esiphethweni sokuthi abaningi abazungezile basuke bengaphili (bheka lesi sihloko), ngikucela ukuthi ucabange futhi ngaleyo nkulumo. Angisho 'ngendlela yokukhuluma' noma 'ngezifanekiso', cha, ngisho ukuthi angaphili kahle. "Hamba uphinde wande" isitatimende esaziwayo [...]
Labo abaye bafunda lesi sihloko mayelana nabantu abanesibindi (NPCs) manje bangaqonda ukuthi igama elithi "ukuqonda" noma "umphefumulo" lingalinganiswa noxhumano olungenantambo phakathi kwesikhombikubona sobuchopho nesimo se-avatar ngokufaniswa. I-avatar ekulandiseni, njengokungathi, ilawulwa ngaphandle futhi ngenxa yalokho iphefumulelwe. Kulesi sihloko [...]
ahanjiswe UKUQALA	by UMartin Vrijland	ngo-8 Julayi 2019	• 17 Amazwana
Kulula ukucabanga, kodwa ingabe uke wazibuza ukuthi ngabe abanye abantu abakuzungezile babe 'nomphefumulo' ngempela? Kumelwe uqale ukubheka okuzungezile ekuphileni kwakho kwansuku zonke futhi ngezinye izikhathi uthole abantu abakwazi kakhulu ukwenza isihawu, kodwa ngempela [...]
Ukuvakasha okuphelele: 2.509.771